Iimvula zamanzi eziTropical - Utyalo lweNdalo IKhabhinethi
Ukulondolozwa kwamahlathi emvula kungabakho umba wokuphila nokufa
Amahlathi aseTropical, apho i-akhawunti kuphela iipesenti ezisixhenxe zehlabathi jikelele, ubunxweme malunga nesiqingatha sazo zonke iintlobo zezityalo. Iingcali zithi indawo engama-square-kilometer e-rainforest ingaba neeninzi ezili-1,500 iintlobo zeentlobo zezimbali kunye nezilwanyana eziyi-750 zeemithi, zonke eziye zaguquka iinkqubo ezikhethekileyo zokusindisa phezu kweeminyaka kangangokuba uluntu luqala ukufunda ukufaneleka iinjongo zayo.
Imvula yamanzi imthombo ocebileyo weeyeza
Iipokethi eziqhekekileyo zabantu basekuhlaleni baye bazi malunga nokuphulukiswa kwezityalo zemvula yamanzi iminyaka emininzi mhlawumbi. Kodwa ukususela kwiMfazwe Yehlabathi II kuye kwaqala ukuphawula, kwaye amanqaku eenkampani zamachiza namhlanje asebenza ngokubambisana nabalondolozi bemvelo, amaqela asekuhlaleni kunye noorhulumente abahlukahlukeneyo ukufumana nokukhathalela izityalo zemvula ngokubaluleka kwazo, kunye nokuhlanganiswa kwazo .
IziMveliso zeMvula zivelisa amayeza okugcina impilo
Izidakamizwa ezingama-120 ezithengiswayo emhlabeni jikelele zifumaneka ngokuthe ngqo kwizityalo zemvula. Yaye ngokutsho kweNational Cancer Institute yase-United States, ngaphezu kweyesibini kweyesithathu kuwo onke amayeza afumaneke ukuba neengxaki zokulwa nomhlaza zivela kwizityalo zemvula. Iimzekelo zanda. Izithako ezithe zafunyanwa kwaye zenziwe ngokususela kwisityalo esipheleleyo esisikhoyo esifumaneka kuphela eMadagascar (de deforestation wiped it out) yandisa amathuba okusinda kubantwana abane-leukemia ukusuka kuma-20 ukuya kuma-80 ekhulwini.
Ezinye zezinto ezikhoyo kwizityalo zemvula nazo zisetyenziselwa unyango lwe-malaria, isifo senhliziyo, i-bronchitis, i-hypertension, i-rheumatism, isifo sikashukela, ukuxhatshazwa kwemisipha, i-arthritis, i-glaucoma, isifo segazi kunye nesifo sofuba, phakathi kwezinye iingxaki zempilo. Kwaye amaninzi anesifo se-anesthetics, i-enzymes, i-hormone, i-laxatives, i-mix mix, i-antibiotics kunye ne-antiseptics nayo ivela kwiimveliso zamanzi kunye nemifuno.
Nangona la mabali aphumelelayo, ngaphantsi kwepesenti enye yezityalo kwiindawo zemvula zasemhlabeni ziye zavavanywa kwiimpawu zabo zonyango. Abangqongileyo kunye nabanonophelo bempilo ngokufanayo banqwenela ukukhusela amahlathi asele asehlabathini njengamajelo amayeza ezayo. Ukuxhamla ngokukhawuleza, iinkampani zonyango ziye zafaka izivumelwano kunye namazwe aseTropiki ezithembisa ukukhuselwa kwamalungelo okuphela "kwe-bioprospection".
Ngelishwa, ezi zivumelwano azizange zihlale, kwaye inzondelelo yaphela. Kwamanye amazwe, ama-bureaucracy, iimvume, kunye nokufikelela kuye kwaba yindleko eqinile. Ukongezelela, ubuchwepheshe obutsha buvumelekile ukuba basebenzise iindlela zokusebenzisana ezinamandla zokudibanisa ukufumana iamolekyu ezisebenzayo ngaphandle kokudaka ngodaka kwiindawo ezikude. Ngenxa yoko, ukukhangela kwezinto ezixutywa ngamachiza emahlathini amahlathi kuye kwancipha.
Kodwa ukuqhubela phambili kwezobuchwepheshe obunokubaluleka kwezinto zokwenza izinto, iil lab eziphuhliswe ngokubhaliweyo ngoku zibanceda kwakhona abathengi bezityalo, kwaye iinkampani ezimbalwa ezinokuxuba imveliso zibuyele emahlathini zifuna izilwanyana ezilandelayo.
Umngeni wokulondolozwa kwamahlathi axabisekileyo
Kodwa ukugcina amahlathi emvula amaninzi akuyona into elula, njengabantu abemi belihlwempu bazama ukuphazamisa ukuhlala kwiindawo kunye noorhulumente abaninzi kwiindawo ze-equatorial zehlabathi, ngenxa yokuphelelwa yintlupheko kwezoqoqosho kunye nokuhaha, ukuvumela imfuyo eyonakalisayo, ukulima, kunye ukungena .
Njengamahlathi emvula ajika kwifama, i-ranch kunye ne-clear cut-cut, ezili-137 iintlobo zezilwanyana-ezityalo kunye nezilwanyana-ziphela zonke iintsuku, ngokutsho kwe-biologist uHarard u-Edward O. Wilson. Abalondolozi banenkxalabo yokuba njengokuba iintlobo zehlathi zinyamalala, ngokunjalo kuya kuninzi ukuphilisa izifo ezisongela ubomi.
Indlela Ongayinceda ngayo Ukugcina Amanzi Amanzi - kunye NezoLuntu
Unokwenza inxalenye yakho ekuncedeni ukugcina amahlathi emhlaba wonke ngokulandela nokuxhasa umsebenzi weemibutho njenge-Rainforest Alliance, i-rainforest Action Network, i-Conservation International kunye ne -Nature Conservancy .
Amachiza omProfethi: Iimfundiso zeMpilo yamaSilam
I-Salmon eFama ne-Wild Salmon: Yiyiphi eyona nto ilungileyo?
Ngaba Ukubhema Kuvumelekile KwiSilamsi?
Yintoni iFracking, Hydrofracking okanye i-Hydraulic Fracturing?
Khokela kwiMibhobho yamanzi
Ngaba I-Sunscreen Inokukhusela Ngempela?
Ingxaki kunye nobuthixo
Marie Curie kwiifoto
Amanani amakhulu kwiMfazwe yeTrojan
Iingoma ezilungileyo zeDinosaur zehlabathi
I-Disc neDrum Brakes
I-Quondo ye-Boondock Saints
I-Albany State University Admissions
Yonke into malunga noThafty-Two Part
Maia, isiGrike isiNymph noMama waseHermes
IYunivesithi yaseColorado iDenver GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Boudicca: Ukubuyisela uMama okanye iMithetho kaMbutho wamaCeltic?
Izifundo zokuSebenza ngokuPhezulu kweeNgcaciso kunye neeKhosi zeKlasi
Iintlobo zeeNkcazo zeNtaba zeBhayisiki
I-Gangkhar Puensum: Intaba yeNtaba ephezulu kunazo zonke
I-Biography yeLugenia iyatshisa iThemba
Ubuntombi boLuntu kunye nezinye iintlobo zobufazi
Ukuhlaziywa: UJohn Legend - "Bonke Bami"
Chase Press: Inqununu yokunyanzelisa inqaba-nkundla
'Est-Ce Que': Indlela yokubuza imibuzo ngesiFrentshi
Kuthetha ntoni okuphakathi kokuNxibelelwano?
Iyintoni intsingiselo yegrama
Yintoni abagwebi abayifunayo kwiProjekthi yeNzululwazi yeNtlalo